UBHEKE OPEN-IFLETI NGE TERRACE ANALIA
I-Wide open-flat (700 sf ca): indawo yokulala/igumbi lokuhlambela + ikhitshi/indawo yokutyela/indawo zokuhlala zohlulwe ziindonga ezi-2 ezinabileyo, ithafa elibanzi elijongene nemithi/ulwandle. Ibhedi elingana nenkosi entsha, ifenitshala kunye nezixhobo zombane, eHotshower. I-AC, iTV, iWiFi, indawo yokupaka igeyithi. Ibekelwe bucala ngokwenyani njengenxalenye yePaki yeSizwe kwaye kwangaxeshanye nje yi-100mt ukuya elunxwemeni nakwiivenkile/kwiindawo zokutyela/kwimarike njl.njl.
Le yindlu yesitudiyo ebanzi (ejikeleze i-65 sqmt) enethafa ngaphambili (icala lolwandle).
Indawo yokulala + yokuhlambela yahlukile kwindawo yokuhlala + yasekhitshini eneendonga ezimbini ezinearched. Zombini ezi ndawo zinemigangatho efakwe iithayile ngokupheleleyo, iindonga zekhonkrithi, iifestile ezibanzi
Indawo yokuhlala+ yasekhitshini inetafile enezitulo ezi-4, ikhabhathi ene-tv, ifriji, isitovu esine-oveni, i-oveni yemicrowave kunye nezinye izixhobo ezisisiseko zasekhitshini.
Indawo yokulala inebhedi enye ephindwe kabini enekhabhathi esecaleni kwebhedi, ikhabhathi evulekileyo yewadilophu.
Ubumelwane: Emazantsi naseMpuma: iPaki yeSizwe kaManuel Antonio, eMantla: ukufikelela kwipropathi, eNtshona: umlanjana, eminye imithi kunye nangaphezulu lunxweme.
4.86 · Izimvo eziyi-291
kwicala elinye (ukuya epakini), ungafikelela ebhankini ("coopealianza", kwindawo efanayo apho uthenga itikiti lepaki) kunye nezinye iindawo zokutyela kunye neehotele ezineswimmingpool evulekileyo (ngokuqhelekileyo zikuvumela ukuba usebenzise ichibi ukuba thatha isiselo esinye ebharini).
kwelinye icala (ukuya elunxwemeni) ufikelela kwiindawo zokutyela eziselwandle kunye neebhari, iivenkile, iivenkile ezinkulu kunye nesikhululo sebhasi.
Izimvo eziyi-1 223
Ndizakubakhona ndilinde ukufika kwakho, ndilungise iflat ndikunike izitshixo